Soomaali gaareysa 1.600 oo qof oo sharciga daganaanshaha Noorweey lagala noqonayo naxdin - iftineducation.com
Soomaali gaareysa 1.600 oo qof oo sharciga daganaanshaha Noorweey lagala noqonayo naxdin
iftineducation.com – Noorway ayaa sheegtay ineey dib u eegis ku sameeyneyso sharciga daganaanshaha soomaali gaareysa 1.600 oo qof. 120 ruux oo ka mid ah dadkaas ayaa waxaa loo diray digniin ah.
Wasiiradda socdaalka dalkaasi Sylvi Listhaug, ayaa sheegtay in arrintani ay sabab u tahay xaaladaha ammaan ee qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya ka wanaagsan tahay intii hore. Waxaana ay sheegtay in talaabadan ka dhanka ah soomaalida ay tahay markii ugu horeeysay ee lugu dhaqaaqo.
Dadka uu isbadalkan saameyn weeyn ku yeelan doono ayaa waxaa ka mid ah qoysas, carruur iyo dhalaan keli socod ah kuwaas oo horey u heeystay sharci ku jooga dalkaasi, balse haatan loo diray waraaqihii digniinta ee loogu sheegayey in sharciga lagala noqon doono.
Telefeyshinka dalkaasi ee NRK oo warkan baahiyey ayaa soo bandhigay walaaca ka muuqato dadkii lugu wargeliyey in sharciga lagala noqday. Waxaa ka mid ah dadkii ka soo dhex muuqday muuq baahiyahaasi nin sheegay inuu macalin dugsi ama malcaamad quraan ahaa ka hor intii aanu Noorweey galin, ayaa sheegay in ardeydiisii qaar ka mid ah ay haatan ku biireen kooxda Alshabaab, sidaas aawadeedna la dilayo haddii lugu celiyo Soomaaliya.
Baashe Muuse oo ka mid ah siyaasiinta soomaalida Noorweey ayaa sidoo kale muuq-baahiya NRK u sheegay in go’aanka dowladda Noorweey uu saameyn weyn ku yeelan doono qoysas badan oo horey u heeystay sharciga deganaanshaha dalkaasi, islamarkaasina ay tahay arrin murugo soo kordhisay.
Mudooyinkii ugu dambeeyey dowladda Noorweey, ayaa qaaday talaabo ay soomaalida dalkeeda heeysta sharciga deganaanshaha qiimeyn, daba-kac iyo baaritaano ku sameeyso. Baraha bulshadda ku xirriirto ee facebook, instagram iwm ayaa ilaha ay dowladu ku qamaamtay ama ka raadisay macluumaad iyo u kuuragelid soomaalida, baaritaanadaas oo la adeegsatay cadeeymo lidi ku ah dadka ay u dirtay digniinta kala noqoshadda sharciga dalkaasi.